एनसेल करबारे प्रधानमन्त्री दाहालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया « Surya Khabar
एनसेल करबारे प्रधानमन्त्री दाहालले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं । विगतमा भएको के हो त्यो जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ, यदि कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ । विक्रेतालाई लाभकर नलिई किन सजिलै छाडियो ? यो गम्भीर विषय हो, ऐन कानुनअनुसार कहाँ काम भएन र के भयो समीक्षा गरिनेछ र दोषीलाई कारबाही गरिनेछ ।
सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिने कर्मचारी वा निकायलाई कारबाही गर्ने बताए । ‘विगतमा भएको के हो त्यो जस्ताको तस्तै आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कसैले गल्ती गरेको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’ विक्रेता कम्पनीबाट कर नउठाई उसलाई भाग्न दिनेमा कोही दोषी भेटिए त्यसलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने उनले बताए । ‘विक्रेतालाई लाभकर नलिई किन सजिलै छाडियो ? यो गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘ऐन–कानुनअनुसार कहाँ काम भएन र के भयो समीक्षा गरिनेछ र दोषीलाई कारबाही गरिनेछ ।’